အမေစုအတွက်ဆွဲထားတဲ့ ပုံတူပန်း ချီေ လးကို kiss ပေးပြီး လှလိုက်တာ လို့ စကားတွေပြောေ နကြ တဲ့ ခေတ် နဲ့ သစ် – XB Media Myanmar
အမေစုအတွက်ဆွဲထားတဲ့ ပုံတူပန်း ချီေ လးကို kiss ပေးပြီး လှလိုက်တာ လို့ စကားတွေပြောေ နကြ တဲ့ ခေတ် နဲ့ သစ်
June 19, 2020 Bestie_Author
ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းတစ်ခြမ်းတွေဖြစ်တဲ့ ခေတ် နဲ့ သစ်တို့ အမြွှာညီအစ်မ နှစ်ယောက်ကေ တာ့ သူတို့ရဲ့ချစ်စဖွယ် အမူကျင့်လေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကိုအချစ်ပိုအောင် လုပ်လိုက်ပြန်ပါပြီေ နာ် ။ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်တဲ့အမေစုရဲ့ (၇၅) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရအနေနဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်တို့ရဲ့ ဖိုးဖိုးဇော်က အမေစု ပုံတူပန်းချီလေးကိုရေးဆွဲခဲ့ပါတယ် ။
ထရီဇာက တော့ “အမေစု စိတ်နှလုံး အေးမြစွာ မျော်မှန်းသမျှ ပြီးပြည့်စုံပါစေ အနီးအဝေးမှ အန္တရာယ်အပေါင်းလည်း ကင်းဝေးပါစေ.. အမြဲတန်ဖိုးထားချစ်မြတ်နိုးစွာ တတ်သည့်နေရာစွမ်း သည့်နေရာမှလည်းအမြဲပါရမီဖြည့်နိုင်ရပါစေ!! စိတ်ရောကိုယ်ရောအနှောင့်အယှက်ကင်းစေချင် မိတာပါပဲ..
အမေဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေအမြန်ပြီးပြည့်စုံလို့ တိုင်ချီဒိုလေးနဲ့ အပင်လေးတွေစိုက် ပန်းချီေ လးတွေဆွဲ ကွတ်ကီးလေးတွေဖုတ်…အဲ့လိုလေးပဲကိုနေစေချင်မိတော့တာ ” ဆိုတဲ့စာ သားေ လးနဲ့အတူ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးထားပြီး ခေတ်နဲ့သစ်တို့ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ပရိသတ်တွေ ကို မျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
ဖိုးဖိုးဇော်ဆွဲတဲ့ အမေစုပန်းချီကို ခေတ်နဲ့ သစ်တို့နှစ်ယောက်က စကားတွေပြောလိုက် ၊ လှလိုက် တာကလည်းပြောသေး, kissတွေကလည်းပေးသေး, အမေကို ကိတ်မုန့်လည်းမကျွေးဘူးလို့ ပြောသေးတယ်လို့ ခေတ်နဲ့သစ်ရဲ့ ချစ်စဖွယ် အမူအကျင့်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် မျှဝေပေးခဲ့ပါသေးတယ် ။
Source : Chit Thu Wai
ပရိသတျတှရေဲ့ အသညျးတဈခွမျးတှဖွေဈတဲ့ ခတျေ နဲ့ သဈတို့ အမွှာညီအဈမ နှဈယောကျ ကေ တာ့ သူတို့ရဲ့ခဈြစဖှယျ အမူကငျြ့လေးတှနေဲ့ ပရိသတျတှကေိုအခဈြပိုအောငျ လုပျလို ကျပွနျပါပွီေ နျာ ။ နိုငျငံတျော အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဖွဈတဲ့အမစေုရဲ့ (၇၅) နှဈပွညျ့မှေးနအေ့မှ တျတရအနနေဲ့ ခတျေနဲ့သဈတို့ရဲ့ ဖိုးဖိုးဇျောက အမစေု ပုံတူပနျးခြီလေးကိုရေးဆှဲခဲ့ပါတယျ ။
ထရီဇာက တော့ “အမစေု စိတျနှလုံး အေးမွစှာ မြျောမှနျးသမြှ ပွီးပွညျ့စုံပါစေ အနီးအဝေးမှ အန်တရာယျအပေါငျးလညျး ကငျးဝေးပါစေ.. အမွဲတနျဖိုးထားခဈြမွတျနိုးစှာ တတျသညျ့နေ ရာစှမျး သညျ့နရောမှလညျးအမွဲပါရမီဖွညျ့နိုငျရပါစေ!! စိတျရောကိုယျရောအနှော ငျ့အ ယှကျကငျးစခေငျြ မိတာပါပဲ..
အမဖွေဈခငျြတဲ့ ဆန်ဒတှအေမွနျပွီးပွညျ့စုံလို့ တိုငျခြီဒိုလေးနဲ့ အပငျလေးတှစေိုကျ ပနျးခြီေ လးတှဆှေဲ ကှတျကီးလေးတှဖေုတျ…အဲ့လိုလေးပဲကိုနစေခေငျြမိတော့တာ ” ဆိုတဲ့စာ သားေ လးနဲ့အတူ မှေးနဆေု့တောငျးပေးထားပွီး ခတျေနဲ့သဈတို့ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ပရိသတျတှေ ကို မြှဝပေေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။
ဖိုးဖိုးဇျောဆှဲတဲ့ အမစေုပနျးခြီကို ခတျေနဲ့ သဈတို့နှဈယောကျက စကားတှပွေောလိုကျ ၊ လှလိုကျ တာကလညျးပွောသေး, kissတှကေလညျးပေးသေး, အမကေို ကိတျမုနျ့လညျး မကြှေးဘူးလို့ ပွောသေးတယျလို့ ခတျေနဲ့သဈရဲ့ ခဈြစဖှယျ အမူအကငျြ့လေးတှကေို ပရိသ တျတှအေတှကျ မြှဝပေေးခဲ့ပါသေးတယျ ။
လှိုငျသာယာစကျမှုဇုနျကြူးကြျောမွမှေ နစေရာ၊စားစရာအခကျအခဲ ဖွဈ နတေဲ့ အသကျ(၉၅)နှဈအရှယျအ ဖှား အတှကျ ထပျမံလှူဒါနျးပေးခဲ့တဲ့ ဆောငျးယှနျးစံ
ဘောလိဝုဒျမှာ အရမျးနာမညျကွီး နေ တဲ့မငျးသားလေးပါဆိုပွီး ‌ယော ကျြား လေးပုံစံပွောငျးကာ ပရိတျသ တျ တှကေိုစနောကျလိုကျတဲ့ မအေး သောငျး